Amarobhothi okuhlanza iSolar, i-Power Inverter, i-Solar Led - i-Multifit
Gxila kubuchwepheshe be-inverter ye-civil kanye neyokuhweba kanye nesisombululo esihlakaniphile.
Iyaqhubeka nokuthuthukisa izixazululo zelanga ezisebenza kahle kakhulu nezingabizi ukuletha ugesi oluhlaza omningi ezimpilweni zethu.
I-Solar Power System
Isevisi ye-ONE-Stop MULTIFIT Amandla aluhlaza. Izinga elingcono.Isevisi engcono. Lapha kukuvumela ukuthi ujabulele ukuthenga endaweni eyodwa. Ukulethwa okuqondile kwasefekthri. Ukwenza ngokwezifiso okuyimfihlo.
I-Solar Panel Clean Robot
Ungawahlanza kanjani amaphaneli akho elanga angcolile Khetha i-Multifit! I-Multifit Solar Cleaning Robot. Ibhrendi yamazwe ngamazwe(Stock NO. 280748) Factory Direct. Isevisi ephelele ngemva kokuthengisa. Xhumana nathi futhi uyithenge.
I-HF Inverter & Isilawuli
Isebenza ngaphandle kwebhethri PV Max 500Vdc Input Intelligent 3 isigaba 80A AC ishaja yebhethri. Ukusebenza kahle okuphezulu, isici samandla 1.0
I-LF Power Inverter
Ishaja ENTSHA ye-Inverter Toroidal transformer: Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, ukusebenza kahle okuphezulu, i-CPU Ehlanganisiwe engu-32-Bit, isikhala sohlelo olwakhelwe ngaphakathi lwe-64K. Idizayini enelungelo lobunikazi, Ukuqashelwa okuphezulu
—— Ukukhanya kwelanga kuwe MULTIFIT kubo bonke
Umkhiqizi we-Inverter Kusukela ngo-2009(I-Stock Exchange 280768)
Isevisi yokuma okukodwa, inikeza uhlelo oluphelele lwamandla elanga, ukulawula ikhwalithi okuqinile. Ithembekile ngemva kwesevisi. CE, TUV, IEC, ISO9001, ISO14000 isitifiketi.
I-Multifit yasungulwa ngo-2009, Ngokusekelwe ekuhlinzekeni ngezitshalo zamandla amancane e-photovoltaic ezisezingeni lomhlaba ukuze kube nezixazululo zezakhamuzi kanye nocwaningo olusha nokuthuthukiswa kwemikhiqizo kagesi yamandla avuselelekayo, sihlakulele iqembu labadayisi kanye namaqembu e-R&D anemibono, isipiliyoni nobuchwepheshe. Umkhiqizo uthole izitifiketi zelungelo lobunikazi ezingaphezu kweziyi-10.Imikhiqizo yethu ...
20+ Imikhiqizo Yelungelo Lobunikazi
Iminyaka engu-12+ embonini yeSolar
Amazwe angama-80+ Thumela ngaphandle
Ithimba lonjiniyela abaqeqeshiwe lithuthukisa ubuchwepheshe obusha kakhulu.
Sinikeza izinsiza ezahlukene
2-Factory ukunikezwa okuqondile
ISolar Pv Systems
Vala igridi ukuze uhlangabezane nemfuneko yakho yansuku zonke ye-electicity, Kugridi ukuze wonge inani elikhulu lemali yakho.
Ukukhanya kwelanga kuwe Multifit kubo bonke
Ukumamatheka okufanayo njengokukhanya kwelanga, ukukulethela uhlaza futhi ujabule